Qorshahaygu Waa Nabad & Nolal sharci ku dhisan
Home / QORSHAHA
Maamul wanaagu waa aasaaska dowladnimada. sidaa awgeed waxaan dhisi doonaa dowlad musuqmaasuq ka hufan, kana fayow wax is-daba-marin, iyo laaluush. Waxaa sidoo kale dhisi doonaa hay’ado ka hufan musuqmaasuq iyo nin jeclaysi, howlahoodana u guta si daah-furnaan iyo isla-xisaabtanna ku dheehan tahay.
Waxaan dhisi doonaa dowlad tusaale u noqota howl-karnimada iyo shaqo wanaagga lagu yaqaano shacabkeenna Soomaaliyeed.
DIB U HESHIISIIN QARAN
Waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin qaran oo dhab ah inay keeni doonta xasilooni wadankeenna oo dhan gaarta. Sidaas awgeed, waxaan dhisi doonaa guddi qaran oo ka kooban siyaasiyiin, aqoonyahano, odayaasha dhaqanka, culimada iyo dadka xurmada gaarka ah ku dhex leh bulshadeena. Waxqabadka gudigaan wuxuu ahaan doonaa sidii dib u heshiisiin buuxda ay ugu horseedi lahaayeen wadankeena.
Waa Muhiim inaan dadkeena barno inay dib u heshiisiintu muhiim u tahay wadajirka qaranimo. Horumarinta dib u heshiintu waxay naga saaraysaa dhibkii nagaaray, waxayna nagaarsiineysaa isfaham aannu uga baxno sababihii keenay qaran-jabka. Hor u socod wuxuu imaan karaa oo kaliya marka aan wajahno dhibkii nasoo maray, aan iscafinno, oo aan bilaabanno maalin cusub.
Waxaan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay in dalka oo dhan laga dhiso hay’adihii caddaaladda. Waxaan hubin doonaa in qof kasta uu helo caddaalad buuxda, isla markaana ay hay’adaha caddaaladdu si siman oo aan eex iyo nin jeclaysi lahayn ula dhaqmi doonaan dhammaan eedaysnayaasha iyo soo-eedeeyayaasha.
Waxaan xoogga saari doonaa in la helo shaqaale u carbisan, aqoon sarena u leh howlaha loo igmaday, sidaas awgeedna si caddaalad iyo daacadnimo ku dheehan tahay u fuliya shaqadooda.
Dib-u-dhiska hay’adihii caddaaladda iyo inay noqdaan hay’ado go’aanadooda sharciga ah u madax bannaan waa arin aasaasi ah, waana muhiim si loo helo caddaalad loo siman yahay.
Waxaan la dagaalami doonaa wixii keeni kara in caddaalad darro ay ka dhacdo hay’adaha dowladda, sida musuq-maasuqa iwm.
Waxbarashada aasaasiga ahi waa xuquuq uu qof walba oo wadani ahi leeyahay, sidaas awgeed, waxaa dowladdaydu siinaysaa ahmiyadda koowaad sidii qof kasta ku heli lahaa xuquuqdiisa aasaasiga ah.
Waxaa waddanka oo dhan aan ka hirgelin doonnaa waxbarsaho tayo leh, waxaanan sidoo kale dhiirrigelin doonaa waxbarashada sida gaarka ah loo leeyahay.
Waxaan sidoo kale dib-u-dhis ku samayn doonaa dugsiyaddii farsamada gacanta iyo tacliintii sare ee dalka, maadaama ay aasaas u yihiin in dalku helo kaadir aqoon leh oo ka qayb qaata dib-u-dhiskiisa.
Waxaa dalkeenna ka jira dhibaato caafimaad darro oo ay sababtay burburkii hay’adihii caafimaadka ku yimid intii lagu jiray qaran-jabka. Sidaas awgeed, dib-u-dhiska hay’adihii caafimaadku waa mid kamid ah ahmiyaddeyda koowaad.
Waxaan dib-u-dhisi doonaa, isla markaasna qalabayn doonaa dhammaan xarumihii caafimaadka qaranka.
Sidoo kale, waxaan dhiirigelin doonaa in maalgeliyeyaashu (shirkadaha iyo shaqsiyaadkuba) ay ka qayb qaataan dhismaha iyo soocelinta hay’ado caafimaad oo tayo leh si ay dadweynuhu u helaan xarummo caafimaad oo ka haqabtira baahidooda dhinaca caafimaadka.
Dadaalada amniga qaran iyo soo kabashada dhaqaale waa inay isla socdaan. Fakhri iyo shaqo la'aan waxay keenaan xagjirnimo iyo argagixiso, waxayna dhiirigeliyaan kooxaha dambiilayaasha ah.
Waxay dowladdeydu dejin doontaa istaraatijiyad horumarin dhaqaale oo dhameystiran taasoo fursado shaqo u abuuri doonta umadda Soomaaiyeed, gaar ahaan dhalinyarada; isla markaanna ka qayb qaadan doonta dib u soo celinta amniga dalka.
Waxaan diirada saarayaa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin jidadka, dekadaha, garoomada diyaaradaha, isbitaalada, iyo xarumaha waxbarashada. Waxaan kobcinayaa maalgashiga dowliga iyo midka gaar ah si loo kordhiyo beerashada iyo waxsoosaarka xoolaha iyo horumarinta kheyraadka badda.
Waxaa kale oo aan fulin doonaa sharciyada ganacsiga qaranka, oo aan dhiiri gelineyno suuqa xorta ah si aan u ilaalinno shuruucda maalgashiga gudaha iyo dibadaba. Xagga maalgashiga, waxaan soo jiidan doonnaa maalgashadayaasha caalamiga ah; waxaanan abuuri doonaa kalsooni wada-shaqeyneed oo aan la yeelanno ururada caalamiga ah. Si aan u adkeyno waxqabadka dowladda, waxaan dib u yagleeli doonaa qaabka canshuur arurinta si aan u kordhinno dakhliga dowladda una yarayno kutiirsanaanta deeq bixiyayaasha.
Waxaan muhiimad gaar ah siin doonnaa dib udhisida Bangiga dhexe ee soomaaliya, si aan u dhisno hey’ad dhaqaale oo sumcad iyo karti heer caalami ah leh oo qaabeysa siyaasad deggan oo lacageed.
Waxaan xiriir wanaagsan la yeelaneynaa Beesha Caalamka, gaar ahaan wadamada aan dariska nahay , kaasoo ku dhisan is xurmeyn iyo sinnaan si’aan nabadgelyo iyo xasilooni uga abuurno gobalka geeska afrika. Waxaan kaloo tixgelin doonnaa heshiisyada caalamiga ah si waafaqsan qawaaniinta caalimiga ah.
HORMARINTA XOOG SHAQAALE OO TAYO LEH
Waxaan joojineynaa maskaxda wadanka ka miirmeysa, waxaanan soo jiidan doonaa dhammaan aqoonyahanada xirfadda iyo kartida u leh iney wax ku kordhiyaan dib u dhiska wadanka.
Waxaan hagar la’aan uga shaqeyn doonaa soo noqoshada iyo dib u habeynta qoxootiga iyo barakacayaasha kuwaasoo in kabadan labaatan sano ku dacdareysnaa dibada iyo wadanka gudihiisaba.
Waxaan furi doonaa xarumo dib loogu tababari doono dadka kaqeyb qaatay Alshabaab, burcad-badeednimo iyo falal dambi oo xad dhaaf ah ayadoo lasiin doono tababaro xirfadeed iyo soo celinta maankooda. Waxaan u tababari doonaa dhalinyaradeena xirfado ay mushaaraad fiican ku kasbadaan, gaar ahaan noocyada kala duwan ee farsamada gacanta.
ILAALINTA DEEGAANKA (Bii’ada)
Waxaan ka hortagi doonaa nabaad guurka degaanka waxaanan hirgalin doonaa xannibaadda dhoofinta dhuxusha. Waxaan isu keeni doonaa dadka aqoonta u leh badbaadinta degaanka si’aan uga faa’ideysanno deegaankeenna anagoon abuureyn nabaad guur, gaar ahaan dhulka iyo duur joogta. Waxaan sameyn doonaa qaab looga hortago kaluumeysiga sharci darrada ah iyo qashinka lagu qubo baddeena.